Homelọ Google bụ onye inyeaka olu maka ụlọ gị site na Google | Gam akporosis
Homelọ Google bụ onye mbụ na-akwado n'ehihie a nke anyị maraworị ụzọ abụọ mbụ maka usoro nkwukọrịta ọhụrụ dị ka Allo na Duo. Abụọ ngwa na-abịa oge ọkọchị a nakwa na ha ga-enwe ọrụ pụrụ iche dịka ntinye nke ọchụchọ Google na ọtụtụ ndị ọzọ.
Site na Homelọ Google anyi ekwuola okwu na nso nso a ma ọ bụ ngwaike izizi ekwuputara na Google I / O 2016. Ogige dị ka Echo nke Amazon nke ga-enye anyị ohere ijikwa ọrụ kwa ụbọchị, kpọọ ọdịnaya multimedia, ekele maka ọkà okwu ya, ma nwee iwu olu ndị ahụ niile ka ha wee gbanye ọkụ n'ime ụlọ ebe obibi ma ọ bụ ziga ozi na kọntaktị.
Homelọ Google pụtara ìhè ịbụ a cylindrical ngwaọrụ na a isi dị ka ọkà okwu na akụkụ elu ebe enwere ọtụtụ ọkụ ọkụ na-enwu mgbe anyị zaghachiri iwu anyị. Ogige nke ga-enye mkparịta ụka ebumpụta ụwa dịka ngwaahịa na ngwa niile egosiri taa site na Google I / O. Ọ bụkwa nnukwu atụmatụ nke Google iji nwee mkparịta ụka dị ụtọ yana azịza nke were ihe niile site na mkparịta ụka.
Ngwaahịa a bụ nnukwu nzọ maka ịntanetị nke ihe site na nke Mountain View na nke ahụ ga-enye anyị ohere ịchịkwa ndị ọkà okwu ndị ọzọ ma ọ bụ sistemụ ụda, ma ọ bụ ọbụna weta abụ kachasị amasị anyị na telivishọn. Willlọ ga-ejikwa mkpu, ọkụ ime, na ngwaahịa Nest dịka thermostat.
N'ebe a Google Assistant ga-abanye dị ka onye isi protagonist, n'ihi na, dịka m kwuru, nwee mkparịta ụka nkịtị na inye ozi niile onye ọrụ ahụ chọrọ.
Enweghị ụbọchị ọ bụla amaara, mana ngwaahịa ga-adị dị na njedebe nke afọ. Nwere ike tinye email gị iji nata ozi sitere na ụlọ.google.com.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ulo Google bu onye inyeaka zuru oke nke ulo gi
Google na-ekwuputa Daydream, ihe omuma nke mebere nke ghọrọ akụkụ nke gam akporo N